amụma nzuzo - EducationBro Study Abroad Magazine
Nke a na iwu nzuzo e weere na mma-eje ozi ndị na-enwe nchegbu na otú ha 'chọpụta mmadụ’ (PII) a na-eji online. PII, dị ka akọwara na US nzuzo iwu na ozi nche, bụ ozi nwere ike ji mee n'onwe ya ma ọ bụ ihe ọmụma ndị ọzọ ka a mata, kọntaktị, ma ọ bụ ịchọta otu onye, ma ọ bụ iji chọpụta otu onye na onodu. Biko gụọ anyị na iwu nzuzo nke ọma iji nweta nghọta doro anya nke anyị si anakọta, ojiji, chebe ma ọ bụ n'ụzọ aka gị chọpụta mmadụ dị anyị website.
Gịnị nkeonwe ka anyị na-anakọta si ndi ya na gaa na anyị na blog, website ma ọ bụ ngwa?
Olee mgbe anyị na-anakọta ozi?
Anyị na-anakọta ozi site na gị mgbe ị ma ọ bụ tinye ozi na anyị na saịtị.
Enye anyị nzaghachi on anyị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ
Anyị nwere ike iji ozi ahụ anyị nakọtara site na gị mgbe ị denyere aha, eme ka a zụọ, banye maka anyị ala, azaghachi a nnyocha e mere ma ọ bụ ahịa nkwurịta okwu, sọfụ website, ma ọ bụ na-eji ụfọdụ ndị ọzọ na saịtị atụmatụ na-eso ụzọ:
Olee otú anyị chebe gị ọmụma?
Anyị website na-scanned na a mgbe niile n'ihi na nche n'olulu na a mara vulnerabilities iji mee ka gị nleta anyị na saịtị ka mma dị ka o kwere omume.
Anyị na-eji mgbe nile Malware ịgụ isiokwu.
Anyị anaghị eji ihe SSL akwụkwọ
• Anyị na-na nye isiokwu na ozi. Ọ dịghị mgbe anyị na-arịọ maka onye ma ọ bụ onwe ozi dị ka aha, na adreesị email, ma ọ bụ nọmba kaadị.
Ànyị na-eji 'kuki'?
Ee. Cookies bụ obere faịlụ na a na saịtị ma ọ bụ ya na-eweta ọrụ na-enyefe gị na kọmputa na-ike mbanye site na gị Web nchọgharị (ma ọ bụrụ na ị na-ekwe) na-enyere na saịtị ma ọ bụ ọrụ eweta si na usoro ịmata ihe nchọgharị gị ma weghara ma na-echeta ụfọdụ ozi. Dị ka ọmụmaatụ, anyị na-eji kuki iji nyere anyị aka icheta na hazie ihe gị ịzụ ahịa cart. Ha na-eji iji nyere anyị aka ịghọta mmasị gị dabeere gara aga ma ọ bụ ugbu saịtị ọrụ, nke na-enyere anyị iji nye gị mma ọrụ. Anyị na-ejikwa kuki iji nyere anyị aka kpokọta nchịkọta data banyere saịtị okporo ụzọ na saịtị na mmekọrịta nke mere na anyị nwere ike na-enye mma saịtị ahụmahụ na ngwaọrụ na-eme n'ọdịnihu.
• -Aghọta na-azọpụta onye ọrụ mmasị maka ọdịnihu nleta.
• -Esochi nke mgbasa ozi.
• Kpokọta nchịkọta data banyere saịtị okporo ụzọ na saịtị interactions ka o wee chụọ mma saịtị ahụmahụ na ngwaọrụ na-eme n'ọdịnihu. Anyị nwekwara ike iji tụkwasịrị obi-atọ ndị ọzọ ọrụ na soro ozi a na nnọchite anyị.
Ị nwere ike ịhọrọ kọmputa gị aka gị oge ọ bụla na kuki a na-zitere, ma ọ bụ i nwere ike na-ahọrọ ịgbanyụ niile kuki. Ị na-eme nke a site mwube ihe nchọgharị gị. Ebe ọ bụ na ihe nchọgharị bụ obere dị iche iche, anya na ihe nchọgharị gị si Help Menu ịmụta ụzọ ziri ezi isi gbanwee gị kuki.
Ọ bụrụ na ị gbanwee kuki anya, ụfọdụ ndị ga-nkwarụ. Ọ ga-emetụta onye ọrụ ahụmahụ na-eme ka gị na saịtị ahụmahụ rụọ ọrụ nke ọma ma ghara arụ ọrụ nke ọma.
Otú ọ dị, ị ka ga-enwe ike idowe iwu .
-Atọ ndị ọzọ ngosi
Anyị na-adịghị ere, ahia, ma ọ bụ n'ụzọ nyefee n'èzí ọzọ gị chọpụta mmadụ ma ọ bụrụ na anyị na-enye ọrụ na tupu ngosi. Nke a adịghị agụnye website mba ndị mmekọ na ndị ọzọ na ndị ọzọ na-aka anyị ka anyị na-arụ ọrụ anyị website, -eduzi anyị azụmahịa, ma ọ bụ na-eje ozi anyị ọrụ, ka oge ra ndị ọzọ ekweta idebe ozi a nzuzo. Anyị nwekwara ike hapụ ọmụma mgbe ọ bụ ntọhapụ kwesịrị ekwesị soro n'iwu, manye anyị na saịtị atumatu, ma ọ bụ chebe anyị ma ọ bụ ndị ọzọ’ ikike, onwunwe ma ọ bụ nchekwa.
Otú ọ dị, -abụghị idemesie amata esenowo ozi nwere ike nyere ndị ọzọ n'ihi na ahịa, mgbasa ozi, ma ọ bụ ndị ọzọ.
-Atọ ndị ọzọ na njikọ
Mgbe ụfọdụ, na anyị inwe uche, Anyị nwere ike ịgụnye ma ọ bụ na-enye atọ ọzọ na-na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na website anyị. Ndị a nke saịtị ndị ọzọ nwere dị iche iche na onwe ha nzuzo atumatu. Ya mere, anyị na-enweghị ọrụ ma ọ bụ ibu n'ihi na ọdịnaya na-eme nke a jikọtara saịtị. Ka o sina dị, anyị na-achọ iji chebe ike n'ezi ihe nke anyị na saịtị na-anabata ihe ọ bụla nzaghachi banyere saịtị ndị a.
Google mgbasa ozi chọrọ nwere ike ikwu na site Google si Advertising Principles. Ha na-etinye n'ime ebe iji nye nti ahụmahụ maka ọrụ. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?HL = en
Anyị na-eji Google AdSense Advertising na website anyị.
Google, dị ka a na-atọ ndị ọzọ na-ere, -eji kuki iji na-eje ozi na mgbasa ozi na anyị na saịtị. Google iji kuki DART-enyere ya na-eje ozi na mgbasa ozi iji anyị ọrụ dabere na aga na nleta anyị na saịtị na saịtị ndị ọzọ na Internet. Ọrụ ike-apụ na ojiji nke kuki DART site na ịga na Google Ad na Content Network iwu nzuzo.
Anyị emejuputa ndị na-esonụ:
• Demographics na Ibute Mmasị-akọ
anyị, tinyere-atọ ndị ọzọ mgbere dị ka Google eji ụzọ ọzọ kuki (dị ka Google Analytics kuki) na-atọ ndị ọzọ kuki (dị ka DoubleClick kuki) ma ọ bụ ndị ọzọ na-atọ ndị ọzọ nchọpụta ọnụ ikpokọta data banyere onye ọrụ mmekọrịta ad anọ amụta na ndị ọzọ na ad ọrụ ọrụ dị ka ha na-emetụta anyị website.
Ọrụ nwere ike ịtọ mmasị maka otú Google akpọsa gị site na iji Google Ad Settings peeji nke. Alternatively, i nwere ike pụọ na site na ịga na Network Advertising Initiative pụọ na peeji nke ma ọ bụ site na iji Google Analytics pụọ na Browser tinye on.
California Online Nzuzo Nchedo Act
CalOPPA bụ obodo mbụ iwu na mba na-achọ azụmahịa weebụsaịtị na online ọrụ biputere a na iwu nzuzo. The iwu na-apụghị iru erukwa ọma karịrị California ka achọ ihe ọ bụla onye ma ọ bụ ụlọ ọrụ dị na United States (na conceivably ụwa) na-arụ ọrụ weebụsaịtị obon chọpụta mmadụ si California eji ọkụ biputere a conspicuous iwu nzuzo na ya website na-ekwu kpọmkwem ọmụma ịnakọta na mmadụ ndị ahụ na ma ọ bụ ụlọ ọrụ na onye ọ na-akọrọ. – Lee ihe na: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf
Dị ka CalOPPA, anyị na-ekweta na ndị na-esonụ:
Ọrụ nwere ike ịga na anyị na saịtị anonymously.
Ozugbo a na iwu nzuzo na-kere, anyị ga-tinye a njikọ ka ya na ebe obibi anyị na peeji nke ma ọ bụ ka a kacha nta, ke akpa ịrịba page mgbe Festọs anyị website.
Anyị Amụma nzuzo njikọ agụnye okwu 'Nzuzo’ na nwere ike mfe ịchọta na peeji nke e kwuru n'elu.
Ị ga-amara gị ọkwa nke ọ bụla Amụma nzuzo mgbanwe:
• Na anyị Amụma nzuzo Page
Nwere ike ịgbanwe gị ozi:
• Site emailing anyị
• Egbu osisi na akaụntụ gị
Olee otú anyị na saịtị aka na Esochina n'ókè?
Anyị na-asọpụrụ na Esochina n'ókè na Esochina, osisi kuki, ma ọ bụ ojiji mgbasa ozi mgbe a na Esochina (DNT) nchọgharị usoro bụ na ebe.
Ndi anyị na saịtị ekwe-atọ ndị ọzọ omume nsuso?
Ọ bụ na-mkpa iburu n'obi na anyị ekwe ka nke atọ ọzọ omume nsuso
iko (Children Online Nzuzo Nchedo Act)
Mgbe ọ na-abịakwute collection nke onye ozi site n'aka ụmụaka na-erubeghị afọ 13 afọ, Ụmụaka Online Nzuzo Nchedo Act (iko) -ewepụta nne na nna na-achịkwa. The Federal Trade Commission, United States’ n'ji nchedo gị n'ụlọnga, enforces ndị COPPA Ọma ahụ, nke ewetara ihe rụọ nke weebụsaịtị na online ọrụ aghaghị ime iji chebe ụmụ nzuzo na nchekwa online.
Anyị na-adịghị kpọmkwem n'ahịa ka ụmụ n'okpuru afọ 13 afọ.
Fair Ozi Omume
The Fair Ozi Omume Principles etolite idé nke nzuzo iwu na United States na-akọ akụkọ ha na-agụnye na-egwuri a dị ịrịba ama ọrụ mmepe nke data nchedo iwu gburugburu ụwa. Ịghọta Fair Ozi Practice Principles na otú ha ga-emejuputa atumatu dị oké egwu ike ime ihe ndị dị iche iche nzuzo n'iwu na-echebe ozi nkeonwe.
Iji na-ekwekọ Fair Ozi Omume anyị ga-ihe ndị na-esonụ anabata edinam, kwesịrị a data iro ime:
Anyị ga gwa ndị ọrụ via na-na saịtị ngosi
• n'ime 7 azụmahịa ụbọchị
Anyị na-ekweta na Onye ahụ efe Ụkpụrụ nke na-achọ na ndị mmadụ nwere ikike na-iwu-achụso enforceable ikike megide data ụtụ na ndị processors onye na-agbasoru iwu. Ụkpụrụ a na-achọ ọ bụghị nanị na ndị mmadụ n'otu n'otu nwere enforceable ikike megide data ọrụ, nakwa na ndị mmadụ n'otu n'otu nwere recourse n'ụlọikpe ma ọ bụ ụlọ ọrụ gọọmenti na ichoputa na / ma ọ kpee ikpe na-abụghị nnabata site data processors.
GA spam Act
The ike-SPAM Act bụ a iwu na-eme ka iwu maka azụmahịa email, akọwaputa a chọrọ maka azụmahịa ozi, -enye nnata ikike nwere ozi ịntanetị kwụsịrị ịbụ we zigara ha, na akpata si siri ike penalties maka imebi.
Anyị na-anakọta gị adreesị email gị iji:
• Send ọmụma, azaghachi ase, na / ma ọ bụ arịrịọ ma ọ bụ ajụjụ
• Usoro iwu na izipu ozi na mmelite banyere iwu.
• Ezitere gị ozi ndị ọzọ metụtara gị ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ
• Market anyị nzipu ozi ndepụta ma ọ bụ nọgide na-izipu ozi ịntanetị ka anyị na ahịa mgbe mbụ azụmahịa ka mere.
Ka-dị na CANSPAM, anyị na-ekweta na ndị na-esonụ:
• -Eji ụgha ma ọ bụ na-eduhie eduhie isiokwu ma ọ bụ adreesị email.
• Mata ozi dị ka onye advertisement na ụfọdụ ezi uche dị na.
• -Agụnye anụ ahụ na adreesị nke anyị azụmahịa ma ọ bụ na saịtị n'isi ụlọ ọrụ.
• Nyochaa-atọ ndị ọzọ email ahịa ọrụ maka nnabata, ma ọ bụrụ na onye na-eji.
• Nsọpụrụ nwepu aha / wepu aha na arịrịọ ngwa ngwa.
• Ekwe ka ndị ọrụ wepu aha site na iji njikọ na ala nke ọ bụla email.
Ọ bụrụ na mgbe ọ bụla ị ga-achọ wepu aha na-anata n'ọdịnihu ozi ịntanetị, i nwere ike Email anyị na
• Soro ntuziaka na ala nke ọ bụla email.
na anyị ga-ese wepụ gị site na ALL mmekorita.
Ọ bụrụ na e nwere ajụjụ ọ bụla banyere nke a na iwu nzuzo, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị site na iji ozi n'okpuru.
Khoriva n'okporo ámá, 50
Ikpeazụ Edited on 2016-07-05